Global Voices teny Malagasy » Nanohitra mavitrika ny jadona miaramila ny olompirenena tao Myanmar nanao ny fitokonana faobe ‘22222’ · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 01 Marsa 2021 4:49 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Vaovao Mafana, Zon'olombelona
Hetsi-panoheran'ny vondrom-piarahamonina nandritra ny fitokonana faobe “22222” tao Myanmar. Saripikan'ny olompirenena mpampita vaovao iray nozarainy tamin'ny Global Voices, nahazoana alalana
Tamin'ny alatsinaiky 22 Febroary, olona an'arivony no nanatevina ny fitokonana faobe nanerana an'i Myanmar nomanina hanehoana fanoherana ny governemanta miaramila.
Nomena laza amin'ny “22222” na “Roa anankidimy” iza mifandraika amin'ny daty (22/2/2021), io fitokonana io no nahavory olona be indrindra hatramin'ny nandrombahan'ny miaramila ny fahefana  tamin'ny 1 Febroary.
Maro ireo tatitra nampitaha  izao hetsika fitokonana izao tamin'ny fitroarana nanerana ny firenena ho fihaikana ny jadona miaramila tamin'ny 8 Aogositra 1988 (Valo efatra) .
Nanao ny fanonganam-panjakana ny miaramila tamin'ny 1 Febroary taorian'ny filazana fa nisy ny halabato bevata tamin'ny fifidianana taona 2020, fiampangana izay ifandroritana amin'ny National League for Democracy (NLD na Ligim-Pirenena ho amin'ny Demaokrasia, antoko mitondra) sy ny vaomieram-pifidanana. Nosamborina nandritra ny andro voalohany nanaovana ny fanonganam-panjakana ireo mpikambana ao amin'ny Parlemanta sy ny manampahefana ambony ao amin'ny NLD, ka anisan'izany ny Mpanolotsaim-Panjakana Daw Aung San Suu Kyi.
Nanomboka  [mg] ny hetsika tsy fankatoavan'ny sivily ny olom-pirenena ho setrin'ny fanonganam-panjakana. Nahazo fanohanana sy laza ny fanentanana na dia teo aza ny fandrarana na fanapahana izay miresaka hetsika, ny fahatapatapahan'ny aterineto, ary ny fampiasan'ny  mpitandro ny filaminana herisetra ho famongorana ireo hetsika manohitra ny fanonganam-panjakana.
Ny fitokonana tamin'ny alatsinainy no mitaratra ny haavon'ny fanafintohinam-bahoaka tamin'ny fanonganam-panjakana, amin'ny mbola ihazonana ireo mpitondra nofinidim-bahoaka, ary ny fitifirana vao haingana nataon'ny polisy tamin'ny mpanao fihetsiketsehana.
Namoaka fijery ankapobeny  taminy hetsika tamin'ny alatsinainy ny mpanoratra an-gazety Wa Lone:
Mikantona ireo toeram-piasana ao Myanmar tamin'ny alatsinainy niantsoana fitokonana faobe hanoherana ny fanonganam-panjakana ara-miaramila ary an'arivony maro ireo mpanao fihetsiketsehana an-tanandehibe maro na dia teo aza ny hafatra masiaka avy amin'ny fitondrana ara-miaramila milaza fa hamoizana aina maro bebe kokoa ny fifanandrinana.
Ny “hafatra masiaka” dia mifandraika  amin'ny fanambaràna navoakan'ny manampahefana manaratsy ny fitokonana sy mandrahona ireo mpandray anjara, hetsika izay nomelohin'ny  manampahaizana manokana iray avy amin'ny Firenena Mikambana avy hatrany.
Mpandray anjara iray amin'ny fitokonana no niteny tamin'ny  gazetiboky Frontier momba ny firotsahan'ny mpiasa hiady amin'ny jadona miaramila:
Raha manohitra ny jadona isika, mety hitifitra antsika ry zareo. Mahalala izany ny rehetra. Saingy mila manohitra ny jadona isika. Adidintsika izany. Izany no mahatonga ny olona maro mivoaka androany hanohitra azy ireo.
Fihariana maro no nanakatona ny asany  ho fitsinjovana ny fitokonana.
Nifampizarana ao amin'ny media sosialy ny sarin'ireo hetsi-panoherana ataon'ny daholobe:
Mihamitombo isan'ora ao afovoan-tanànan'Yangon voamariky ny Pagoda taloha ao Sule ny fitokonana faobe “Roa Dimy” ho fanoherana ny fitondrana miaramila tamin'ny 22.2.2021
Taunggyi – andro faha-19 ny hetsi-panoherana tamin'ny 22 febroary
Nivoaka matanjaka hanatontosa ny andro ‘22222’ ny mpanao fihetsiketsehan'ny Taunggyi
Fitokonana faobe manerana ny firenena ‘22222’: mandray anjara amin'ny hetsika sit-in lehibe ho fanoherana ny fitondrana miaramila androany alatsinainy maraina ny mponin'i Mandalay, manamarika ny fitokonana faobe Myanmar “22222”. (Saripika: The Irrawaddy)
Myanmar androany (Mandalay)
Ao anatin'ireo hita nanohana ny hetsika tsy fankatoavan'olompirenena ireo moanina bodista maro.
Moanina anisan'ireo nandray anjara tamin'ny fitokonana faobe “22222” tao Myanmar. Sary avy amin'ny olompirenena mpanoratra an-gazety nozarainy ho an'ny Global Voices, nahazoany alalana
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2021/03/01/151630/
 ny fahefana: https://globalvoices.org/2021/02/01/what-happened-in-myanmar-on-the-first-day-of-the-coup/
 fijery ankapobeny: https://twitter.com/walone4/status/1363725204392935424
 niteny tamin'ny: https://www.frontiermyanmar.net/en/myanmar-protests-live/
 no nanakatona ny asany: https://twitter.com/FreeKachin/status/1363695428009680896